Maamulka Galgaduud oo billaabaya howlgal ka dhan ah Al-Shabaab. - Wargeyska Faafiye
Maamulka Galgaduud oo billaabaya howlgal ka dhan ah Al-Shabaab.
Maamulka dowladda ee gobolka Galgaduud ayaa sheegay inay dhowaan gobolka ka billaabanayaan howlgallo kooxda Al-Shabaab looga saarayo deegaannada ay uga sugan tahay gobolka.
Guddoomiyaha gobolka Galgaduud, Xuseen Cali Weheliye (Cirfo) oo u warramay Bar-kulan ayaa sheegay in howlgalka ay iska kaashanayaan ciidamada dowladda federaalka ah ee Soomaaliya iyo kuwa AMISOM oo gacan ka helaya maamulka iyo shacabka gobolka.
Cirfo ayaa kooxda Al-Shabaab kula taliyay inay ka waantoobaan dagaalka iyo dhibaatada ay wadeen muddada dheer, ayna isu soo dhiibaan dowladda.
Ciidamo ka tirsan howlgalka AMISOM ayaa dhowaan gaaray magaalada Dhuusamarreeb ee xarunta gobolka Galgaduud, kuwaas oo sheegay inay ku wajahan yihiin deegaannada gobolka ee ay ku sugan tahay Al-Shabaab.
Recent PostsBoqorka Sacuudiga oo wiilkiisa ka dhigay dhaxal sugeDaawo VIDEO : ‘Gaajo ayuu u dhintay wiil aan dhalay oo shan jir ahaa’Ahmed Kathrada, ninkii la xirnaan jiray Mandela, oo dhintayGeneral favors more aggressive approach in SomaliaUNHCR oo dalbatay baaritaan laagu sameeyay qaxootigii Soomaalida ee Yaman lagu laaayay.Editor’s Pick . Telefoonkii Hitler oo $243 kun oo dollar lagu iibsaday.43Random PostsPolice find 6 Somali migrants abandoned by people traffickers in Mexico.New survey shows female genital mutilation on decline in Somalia .Sidee ayuu ku dhacay qaraxii Tiyaatarka?Ganacsade Abdi “Gurhan” Mohamed Oo Isu Taagay Gudoonka Minneapolis Park and Recreation Board.Puntland oo kobcineysa dhaqaalaha gudaha.